जहाँ महिलाको ‘लामो कपाल’ हेर्नकै लागि जान्छन् यति धेरै मानिसहरू… ! (भिडियोमै हेर्नुस्) – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > जहाँ महिलाको ‘लामो कपाल’ हेर्नकै लागि जान्छन् यति धेरै मानिसहरू… ! (भिडियोमै हेर्नुस्)
admin September 9, 2020 जीवनशैली, भिडियो, रोचक	0
एजेन्सी- संसारमा हुने गरेका तथा भवितव्यबाट बनेका विचित्रका घटना घटेका हामीले सुन्दै र देख्दै आएका छौं । मानिसहरुले आफ्नो गाउँ ठाउँको विकासका लागि अने तौर तरिका अपनाएको समेत पाइन्छ । चीनको एक गाउँमा पर्यटक भित्र्याउनका लागि त्यहाँका महिलाहरुले औसतभन्दा लामो कपाल पाल्ने गरेका छन् । चीनको आंग्झी प्रान्तस्थित हुआन्गुलो गाउँ लामो कपाल भएका महिलाहरुको गाउँका रुपमा समेत परिचित बनेको छ ।
उक्त गाउँका अधिकांश महिलाहरु लामो कपाल पाल्छन् । उनीहरुको कपालको लम्बाई १.४ मिटर देखि २.२ मिटरसम्म हुने जनाइएको छ। महिलाहरुको लामो कपालकै कारण यो गाउँ दुनियामा चर्चित छ । महिलाको कपाल हेर्नकै लागि वर्षेनी ८० हजार पर्यटक उक्त गाउँमा पुग्ने गरेको बताइन्छ । अहिले उक्त गाउँमा महिलाको लामो कपाल हेर्नकै लागि विभन्न देशबाट पर्यटकहरु जाने गरेका छन् ।
यी महिलाहरुलाई ‘रेड याओ’ पनि भन्ने गरिन्छ । यहाँका महिलाहरुले प्रायः रातो रङको कपडा लगाउँछन् । आफ्नो लामो कपाललाई लिएर महिलाहरु निकै गौरवान्वित समेत हुन्छन् । यो गाउँ दुनियाको सबैभन्दा लामो कपाल भएका महिला भएको गाउँका नाममा गिनिज बुकमा रेकर्ड दर्ज गराइसकेको छ ।
सन् १९८७ सम्म त्यहाँका महिलाहरुले आफ्नो कपाललाई खुल्ला बाहिर देखाउँदैनथे । केवल महिलाले पति र आफ्ना छोराछोरीको अगाडि मात्र कपाल देखाउने चलन थियो । कपाल नुहाउँदा समेत निलो स्कार्फले छोपेर नुहाउने गर्थे । तर समय बदलिँदै गयो । कपाल छोप्ने परम्परा मात्र हटेन पर्यटक भित्र्याउने गतिलो माध्यम समेत बनेको छ ।
रिया पक्राउ परेपछि रियाले लगाएको टिसर्ट अभियानले बलिउडमै यस्तो तरङ्ग!